Honor 9X sy 9X Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Herinandro vitsivitsy lasa izay naseho ny daty fametrahana azy ny Honor 9X. Tao anatin'izay herinandro lasa izay dia nisy ny honohono momba ny famelezana ny tsena fotsiny io finday io na tsia. Ary farany, araka izay azo atao mba hahalala vao tsy ela, tamin'ity fotoana ity hisy maodely roa. Ho fanampin'ny maodely mahazatra dia hitantsika ny 9X Pro. Ireo finday roa ireo dia efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ny Honor 9X sy 9X Pro dia aseho ho toy ny fanavaozana ny elanelan'ny marika sinoa. Telefaona mahery vaika roa, misy famaritana tsara ary koa misy vidiny ambany dia ambany. Fangaro izay mahatonga azy ireo tena irina eny an-tsena. Ary efa fantatsika ny momba azy rehetra.
Ireo maodely roa dia mitovy amin'ny fomba rehetra. Mikasika ny famolavolana, ny marika sinoa dia nampiasa fakantsary azo esorina eo alohany, mba hahitantsika ny fomba ampiasain'ny efijery ny ankamaroan'ny alohan'ny telefaona. Ao aoriana dia misy fahasamihafana misy amintsika, satria tonga ny maodely iray miaraka amin'ny fakantsary roa ary ny iray miaraka amin'ny telo. Iray amin'ireo fahasamihafana kely eo amin'izy roa.
Honor dia manambara izay telefaona manana Android Q
1 Manomeza famaritana 9X sy 9X Pro
Manomeza famaritana 9X sy 9X Pro
Amin'ny ambaratonga teknika dia afaka hitantsika izany misy fahasamihafana vitsy eo amin'ny Honor 9X sy ny 9X Pro. Ho fanampin'ny fakantsary any aoriana, ny RAM sy ny fitehirizana fitehirizana dia samy hafa amin'ny telefaona roa. Saingy mamela antsika hamolavola endrika mitovy izy ireo amin'ny tranga rehetra ary mijanona ho tsy miova ny miavaka azy. Modely roa izay tsy isalasalana fa mihaona tsara amin'ny zavatra azontsika antenaina amin'ny marika ankehitriny. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
LCD LTPS 6,59 mirefy misy vahaolana
FullHD + amin'ny 2.340 x 1.080 teboka LCD LTPS 6,59 mirefy misy vahaolana
FullHD + amin'ny 2.340 x 1.080 teboka
Kirin 810 miaraka amin'ny Mali G52 MP6 GPU Kirin 810 miaraka amin'ny Mali G52 MP6 GPU
RAM sy fitehirizana
Azo aorina amin'ny MicroSD hatramin'ny 512GB 8GB / 128GB
Azo aorina amin'ny MicroSD hatramin'ny 512GB
48 MP miaraka amina aperture f / 1.8 + 2 MP 48 MP miaraka amina aperture f / 1.8 + 8 MP + 2 MP
MP 16 miaraka amina f / 2.2 aperture MP 16 miaraka amina f / 2.2 aperture
Android 9 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1 ho toy ny sosona fanaingoana Android 9 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1 ho toy ny sosona fanaingoana
Mpamaky ny tanan-tanan-tanana Mpamaky ny tanan-tanan-tanana
X X 163,1 77,2 8,8 MG
Gramin'ny 206 X X 163,1 77,2 8,8 MG
Ny marika dia manolotra antsika telefaona roa miaraka amin'izany Tonga hanome ady be izy ireo eo afovoany. Araka ny hitantsika, ireo maodely roa ireo dia toy ny rano roa mitete, miaraka amin'ny fahasamihafana roa lehibe fotsiny amin'ny famaritana azy ireo, dia ny fakan-tsary sy ny RAM ary ny kinova fitahirizana. Ka asehon'izy ireo anay maodely roa voafaritra tsara, saingy misy fahasamihafana sasany.
Ny Honor 9X no maotina indrindra, miaraka amina fakan-tsary avo roa heny amin'ny tranga misy anao. Ny sensor voalohany dia 48 MP ary mampiasa MP 2 faharoa. Amin'ny tranga 9X Pro dia ampiana sensor 8 MP fahatelo eo afovoany. Ka hanana fahafaha-manao bebe kokoa isika rehefa maka sary. Ny fakantsary amin'ny telefaona roa dia tonga matanjaka amin'ny alàlan'ny fitsikilovana artifisialy, ho an'ny fizahana sary sy fomba fakana sary fanampiny amin'ity tranga ity Ny fahasamihafana hafa dia ny fitambaran'ny RAM sy ny fitehirizana, izay ao amin'ny maodely Pro dia somary matanjaka kokoa miaraka amin'ny RAM 8 GB.
Raha tsy izany dia tsy misy fahasamihafana eo amin'izy roa. Mamela antsika hanana bateria mahazaka 4.000 mAh tsara izy ireo, izay tsy isalasalana fa hanome fahaleovan-tena tsara amin'ny mpampiasa. Inona koa, Ampiasao ny Kirin 810 ho toy ny processeur, puce iray izay Huawei natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity. Ka ireo Honor 9X ireo no lasa voalohany nampiasa an'ity processeur ity. Ity dia zavatra efa honohono nandritra ny herinandro maro, araka ny efa nolazainay taminao, ary tanteraka izany.
Araka ny hitantsika tao amin'ny andinindininy, dia mahita kinova maromaro momba ireo Honor 9X sy 9X Pro izahay, miankina amin'ny RAM sy ny fitehirizan'izy ireo. Amin'izao fotoana izao, ireto maodely roa ireto dia natolotra tany Sina, izay hany tsena nanamafisana ny fandefasana azy. Na dia antenaina aza fa afaka herinandro vitsivitsy dia hanomboka any Eropa ihany koa izy ireo, saingy tsy misy daty ireo aloha.
Amin'ny tranga Honor 9X dia mahita kinova telo izahay tsy mitovy amin'ny telefaona. Ireto misy vidiny sahala amin'izany ihany ho an'ny tsena any Shina:
Ny kinova miaraka amin'ny 4/64 GB dia mitentina 1.399 yuan (eo ho eo amin'ny 181 euro raha hanova)
Ny maodely 6/64 GB dia mitentina 1.599 yuan (eo ho eo amin'ny 207 euro raha hiova)
Ny kinova miaraka amin'ny 6/128 GB dia mitentina 1.899 yuan (eo ho eo amin'ny 246 euro raha hanova)
raha mbola ny Honor 9X Pro dia mamela antsika kinova roa samihafa, izay ny vidiny voamarina ao Shina dia ireto manaraka ireto:
Ny kinova miaraka amin'ny 8/128 GB dia mitentina 2.199 yuan (eo ho eo amin'ny 285 euro novaina)
Ilay maodely 8/256 GB dia mitentina 2.399 yuan (eo ho eo amin'ny 311 Euros)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Honor 9X sy 9X Pro: Ny marika afovoany vaovao an'ny marika
Xiaomi dia miditra voalohany ao amin'ny lisitry ny Fortune Global 500
Ny Vivo Z5 dia efa manana daty famotsorana ary misy sary ofisialy